Nametra-pialana ny filoha lefitry ny Oppo ary lasa CEO tamin'ny Realme | Androidsis
Oppo VP nametra-pialana ho lasa CEO an'ny Realme
Toy ny Honor sy Huawei, ary Nubia sy ZTE, Oppo dia nitondra an'i Realme, sampan-draharahan'ny orinasa izay manana CEO vaovao ankehitriny. Ity i Sky Li, ny filoha lefitra taloha an'ny Oppo izay vao avy nametra-pialana tamin'io toerana io mba hanome fampianarana vaovao ho an'ny Realme.
Na dia mety fanovana ekipa tsotra kokoa noho ny zavatra hafa aza ity fanapahan-kevitra ity, ny zava-misy fa te-hanome toerana ambony ny Oppo dia ny tena misongadina indrindra, satria manana fahaleovan-tena bebe kokoa ny miasa amin'ny faritra samihafa.
Ity marika kely ity dia teraka tany India tamin'ny Mey tamin'ity taona ity. Izy io dia nitondra antsika ny Realme 1 ho maodely voalohany, izay amidy amin'ny Internet irery ihany.
Anisan'ireo drafitra fohy sy antonony ataon'ny Realme, hoy ny naoty Gartner, miaraka amin'ny fanambaràn'ny CEO vaovao, dia ny fanitarana mankany Afrika, Midwestwest, tsena misongadina ao Azia, ary Eropa afovoany sy atsinanana. Tsy manadino an'i India, tsena lehibe nanombohany izany.
Amin'ny lafiny iray, manantena ny orinasa fa nahatratra fitomboana 9% tamin'ny faran'ny taona, araka ny fanambarana nomena tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nanaovana izany fanambarana izany. Miorina amin'izany, mety handefa fitaovana misy fiasa manintona ny masonao sy ny mason-tsivana ianao hanakoako ny sori-dalana vaovao mba hisarihana ny sain'ny besinimaro manjifa.
Raha miresaka bebe kokoa momba ny Realme, ny orinasa dia manana hevitra mazava: hifaninana amin'ny tsenan'ny finday antonony. Ity, rehefa torontoronina any India - faritra misongadina - ho an'ny daholobe tsy manam-bola firy, dia mikasa ny hanohy ny laharana mitovy amin'ny Realme 1, izay Ny tanjony dia tsy iza fa ny fanolorana ireo finday antonony miaraka amin'ny vidiny mirary toy ny fanaon'ny Oppo matetika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Oppo VP nametra-pialana ho lasa CEO an'ny Realme
Ny finday 5G an'ny Huawei dia hampiasa rafitra fanamafisana mandroso
Ny edisiôna Xiaomi Mi 8 Explorer Edition dia mandalo ny TENAA miaraka amina fihenam-bidy